'अवैध डाक्टर' प्रहरी हिरासतमा: अस्पतालमा विरामीको चाप उस्तै! :: PahiloPost
'अवैध डाक्टर' प्रहरी हिरासतमा: अस्पतालमा विरामीको चाप उस्तै!
2nd February 2018 | १९ माघ २०७४
काठमाडौँ: चुच्चेपाटीस्थित चाइना ग्रेटवाल हेल्थ सेन्टरमा बिरामीको चाप छ। भित्र रहेका बेड भरिभराउ छन्। बाहिर बिरामीको चाप उस्तै। रिसेप्सन डेस्क खाली छ। प्रशासनमा कोही मान्छे छैनन्। अस्पतालमा एकजना पनि डाक्टर देखिँदैनन्। जम्मा एउटा नर्सले अपरेशनको ड्रेसिङ गर्ने काम गरिरहेकी छन्।
नयाँ आउने बिरामीको नाम टिप्न समेत उनी एक्लैले भ्याएकी छिन्। फोनको घण्टी उस्तै बजिरहेको छ। फोनबाटै बिरामीको नाम टिपेर उनको जवाफ हुन्छ ‘डाक्टर आएपछि खबर गर्छौँ। अहिले बिदामा छन।’
उनकै कन्ट्रोलमा अस्पतालमा ड्रेसिङ मात्रै भए पनि चलिरहेको छ। पायल्स, फिस्टुला पत्थरीलगायत रोगको उपचार हुने अस्पताल केही दिनदेखि आफैं बिरामी छ। थोरै बिरामीहरुले मात्र यो सत्य थाहा पाएका छन्।
बिरामीहरु एक आपसमा आफू ठगिएको कुरा सुनाउँदैँ छन्। पुराना फलोअप गर्न आउने बिरामी अब के गर्ने दोधारमा छन्। नयाँ आउनेहरु यत्रो भइसक्दा पनि केही थाहा नभएको सुनाउँदै छन्।
‘अस्पतालका डाक्टरहरु सबैलाई प्रहरीले समातेर लग्यो रे’ एकजना बिरामीले भनिन्, ‘पायल्सको अपरेशन गर्न एक लाख लाग्यो। अहिले फलोअपमा आउँदा कोही डाक्टरहरु छैनन्। ठग अस्पताल रैछ।’
‘अपरेशन गर्नलाई पैसा तिर्‍यौं। यहाँ डक्टर छैनन्। सञ्चालको फोन उठ्दैन। ठग सञ्चालक रैछ’, बिहीबारका लागि अपरेशनको डेट पाएका एक बिरामीले प्रतिक्रिया दिए 'धन्न सही टाइम परेछ। पैसा गए पनि अपरेशन चाहिँ भएन। अब पैसा त फिर्ता जसरी नि गरिन्छ।'
फलोअपमा आउने बिरामी अन्योलमा छन्। अपरेशनका डेट पाएकाहरु डाक्टरको प्रतीक्षामा। डाक्टर बिदामा ठानेर फर्किएका बिरामीहरुको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। फोनबाट नाम टिपाउने पनि उतिकै छन्।बिरामीको आउजाउ अस्पतालमा राम्रै छ।
अपरेशन बेडमा ६ जना बिरामी छन्। भर्खरै अपरेशन सकिएका।
‘अस्ति प्रहरीले पक्राउ गर्दा चाइनिज डाक्टर रुँदै गइन्। अस्पताल सञ्चालकको बदमासी देखिन्छ। सबैलाई मिलाएको छ। केही हुन्न भनेर उनीहरुलाई ल्याएको थियो रे’ तीमध्ये एकजनाले भने, ‘प्रहरीले बिरामीको रिपोर्ट सबै लग्यो। डक्टरलाई पनि लग्यो। हामी बिचल्लीमा पर्‍यौं। एउटा नर्सको भरमा छौँ।’
केही दिनमा अस्पताल राम्रोसँग सञ्चालन हुने सहानुभूति पाएको ती बिरामी बताउँछन्। धेरै जसो आउने बिरामीहरुको उपचारको लागि नाम लेखाएको उनले बताए। उनी भन्छन् ‘कोही कोहीलाई मात्र थाहा छ यस्तो। तर, वास्तवमा बिरामीको चाप घटेको छैन।’
यति भनेर उनले पक्राउ परेका डाक्टरको रुमतिर इशारा गरे।
डाक्टरको नाम : लंग गुयोङ।
पोष्ट : जनरल सर्जरी।
एनमसी रजिष्ट्रेसन नम्बर: ०१४४४००५८६८१७।
उनले डक्टरी अभ्यास गर्ने रुम खाली छ। उनी प्रहरी हिरासतमा छिन्। सिआइवीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले उनीहरुले मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमति नलिएको बताएको छ। कतिपय डक्टर भनिएकाले एमबीबीएस पास नै गरेका छैनन्। उक्त रजिष्ट्रेसन नम्बर फर्जी भन्ने प्रष्ट छ।
त्यस्तै बौद्धनाथ गेट अगाडिको चाइना पिपुल्स अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा समेत बिरामीहरुको चाप राम्रै छ। अस्पतालमा डाक्टर छैनन्। रिसेप्सनमा एक महिला छिन्। अपरेशन सकेका बिरामी र बिरामीका कुरुवा बेडमा छन्। डक्टरको प्रतीक्षामा अन्योल मान्दै बसिरहेका छन् उनीहरु।
नयाँ आउने बिरामीहरु रिसेप्सनमै नाम लेखाइरहेका छन्। बिरामीहरुको चहलपहल राम्रै देखिन्छ। धेरै सोधी-खोजी गर्नेहरुको लागि रिसेप्सनबाट दुई किसिमको जवाफ आउँछ।
पहिलो: नाम लेखाएर जानुस्। डाक्टर आएपछि कल गर्छौँ। १ बजेपछि डाक्टर आउनुहुन्छ।
दोस्रो : डाक्टरहरु बिदामा हुनुहुन्छ। १० दिनपछि आउनुस्।
त्यस्तै नजिकै रहेको चाइनिज डेन्टल अस्पतालको अवस्था पनि चाइना पिपुल्सको भन्दा फरक छैन। बिरामीहरु आएका छन् गएका छन्। डाक्टर पक्राउ परेको असर ती अस्पतालमा पनि देखिँदैन।
ठमेलस्थित एपोलो अस्पतालबाट केही डाक्टर पक्राउ परे पनि अस्पताल सञ्चालनमै छ। नाक, कान, घाँटीलगायत उपचार हुने अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
बिरामीहरुको चाप घटेको देखिन्न। रिसेप्सनबाट जवाफ आयो, ‘चाइनिज डाक्टरलाई मात्र पक्राउ गरिएको हो। अरु डाक्टरहरु हुनुहुन्छ। तपाइँहरु डराउँनु पर्दैन। के लागि हो नाम लेखाउनुस्।’
बिरामी ढुक्कसाथ डाक्टरको प्रतीक्षामा छन्। धेरै सोधी-खोजी पछि पत्ता लाग्यो -त्यहाँ हेल्थ एसिटेन्ट मात्रै छन्। डाक्टर १ बजेपछि मात्रै आउने जानकारी दिइए पनि अवस्था अन्योल नै छ। उल्लेख गरे जस्तै डाक्टरहरु उपस्थित हुन सक्ने अवस्था त्यहाँ पनि देखिन्न। तर, बिरामीहरुको चाप घटेको छैन।
अवैध रुपमा अभ्यास गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवीले) गत सोमबार डाक्टर र अस्पताल सञ्चालक गरेर २० जना पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ गरेका १७ जना डाक्टरहरु प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीहरु कार्यरत अस्पतालमा भने बिरामीको चाप घटेको देखिन्न।
पक्राउ परेका १७ जनालाई ७ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बुधबार अनुमति दिएको छ। प्रहरीले ठगी अभियोगमा म्याद थप गरेको हो।
राजधानीका विभिन्न अस्पतालमा आफूलाई डाक्टर बताएर अवैध रुपमा काम गरिरहेका उनीहरु अमेरिका, अस्ट्रेलिया र चीनका नागरिकहरु हुन्।
राजधानीको ठमेलस्थित एपोलो इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक, बौद्धस्थित चाइना ग्रेटवाल हेल्थ सेन्टर, सिविक हस्पिटल ट्राभल मेडिसिन सेन्टर, चाइना पिपुल्स हस्पिटल, चाइनिज डेन्टल हस्पिटल लगायतका अस्पतालमा काम गरिरहेका विदेशीसहित अस्पताल सञ्चालक पक्राउ परेका थिए।
यी हुन पक्राउ पर्ने
चाइना ग्रेटवालका सञ्चालक नारायण तिमिल्सिना, लुङ युङचाओ, लुङ गोयुङ, सिविककी प्रतिभा पाण्डे, अस्ट्रेलियन नागरिक सराह एन्ने केम्प।
एपोलो पोलिक्लिनिककी सञ्चालक मीनाकुमारी श्रेष्ठ, हुयाङ साओवेन, पान मेइ सङ, काइ सुसियान, लि लिङहोङ, जेङ सुहवा, लुओ लिमिङ, जियाङ हङ्गेवेई, लिउ जिक्विन।
चाइना पिपुल्स हस्पिटलका जौ जी, वाङ जिङ्लो र चाइना डेन्टलका लि योङमेई।
विदेशी डाक्टर नेपालमा अभ्यास गर्न मेडिकल काउन्सिलको अनुमति लिनुपर्छ। सिआइबीले बताए अनुसार कतिपय डाक्टरले एमबीबीएस पढाइ समेत पूरा गरेका छैनन्।
'अवैध डाक्टर' प्रहरी हिरासतमा: अस्पतालमा विरामीको चाप उस्तै! को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।